1. Mayelana namakhekhe Ngomkhosi wenjabulo Ibaluleke kakhulu Ngoba iphunga lamakhekhe ligcwalisa indlu futhi lidala ukuthinta okufudumele ngenkathi ezayo. Kepha izithako ezisemakhekhe ezibenza babe bahle ukuba bazidle futhi bengeze ubusha ziyibhotela elingenakugwemeka. Esikhundleni sokuyithenga esitolo noma ebhikawozi Kungenzeka kungabukeki kukhethekile futhi uthole ukunambitheka okuhlukile Namuhla sizokutshela ukuthi ungenza kanjani ubisi lwebhotela olula ukuhlobisa amaqebelengwane ukuze udale ukumamatheka nenjabulo. Kuyini ubisi lwebhotela?
2. Ake sazi ukuthi yini ubisi lwebhotela kuqala. Ziyizithako ezivame ukusetshenziselwa ukubhaka namakhekhe. Eyaziwa nangokuthi imisila yebhotela Ukuphumula kokwenza ukhilimu webhotela. Lokhu kubizwa ngokuthi yi-churning, kanti lonke uketshezi ubisi lwebhotela.Ubunjwa nokwakheka kwalo kufana nobisi olucekethekisiwe. Noma ubisi olumuncu Ezinye izindawo ezifana neYurophu Isetshenziswa kabanzi ekuphekeni Futhi abanye abantu bayathanda ukuwuphuza ngoba unezinzuzo ezifanayo nobisi, kepha awunamafutha. Izinsiza zobisi itafula
3. Uyenza kanjani ibhotela elenziwe ekhaya Thela isipuni esingu-1 sejusi likalamula noma i-vinaigrette ngenkomishi eyodwa yobisi, okungcono ubisi olunonile noma olungu-2%, kepha ubisi olunamafutha alulungile. Ngoba sisebenzisa amafutha ukudala ukusabela
4. Hlanganisa izithako ndawonye bese ushiya imizuzu engu-5 - 10, bese ugovuza ngokushesha ngesipuni sokulinganisa. Kuze kube yilapho ubisi luqala ukuhlangana lube izigaxa ezincane. Kuze kuqale ukuqina Iyasebenziseka Uyenza kanjani ibhotela lethu elenziwe ekhaya. Inganikeza imiphumela engagxilile njengaleyo ethengwe ezitolo ezinkulu. Kepha kholwa kuhlanzeko Nokunambitheka okumsulwa okuxubene nokunakekelwa ukudala izakhi ezihle kakhulu zomsoco womndeni.
5. Imenyu eyenziwe nge-buttermilk eyenziwe ngokwenza Kunamamenyu amaningi asebenzisa ubisi lwebhotela olwenziwe ekhaya. Thela ama-pancake, uhlobise ngesithelo noju. Lokhu kuzoba neresiphi ekhethekile ye-pancake emnandi futhi enephunga elimnandi ngokunambitheka okuncane okumuncu nokunamafutha okungadliwa nomndeni wonke.
6. Noma uyihlanganise namazambane abilayo bese uwaxubana abe yinyama eyodwa. Ikhonzwa ngezimbambo ezigayiwe Kuzoba mnandi ngendlela emangalisayo. Hlobisa isinkwa esihle sekhekhe ngesikhathi somkhosi woNyaka Omusha. Ngokuqinisekile kuzokwenza ubukhulu benambitheka buhluke Okubaluleke kakhulu, ingenziwa nomndeni wakho kanye nezingane zakho. Vumela ubisi lwebhotolo olwenziwe lwenze ngcono ukunambitheka kokudla kwakho. Kwenze ngokwakho, chic